Qormo xiiso xambaarsan:Masayrka & saamaynta uu qoyska u leeyahay(Q.2-aad) – SBC
Qormo xiiso xambaarsan:Masayrka & saamaynta uu qoyska u leeyahay(Q.2-aad)
Posted by editor on July 5, 2011 Comments
Maanta oo Talaado ah waxaan idiin soo gudbinaynaa sidii aan horey idinkugu balanqaadnay qaybtii albaad ee qormooyinkii Saayeynta Masayrku uu ku yeesho qoyska.
Qormooyinkan oo aad u xiiso badan isla markaana ay ka faa’idi doonaan, lamaanayaal is qaba, kuwa waayuhu kala wadeen & kuwa haatan u xusul duubanaya dhismaha qoys salbaraan oo ka gudba wacdaraha aduunka & waayaha nolosha waxaa qalinka u qaatey Qoraa Sare Cali Maxamed Muuse Cali (Jiim) oo ka mid ah qorayaasha ama saxafiyiinta rug cadaaga ah ee warbaahinta SBC & guud ahaan Soomaaliya.
Masayrka iyo saamaynta uu qoyska u leeyahay.
W/Q: Cali Maxamed Muuse (Cali Jim)
Waa gortaas marka ay haweeneyda masayrsani ay si joogto ah u tiraahdo ereyo ay ka mid yihiin: Ninkeyga xaalkiisu ma fiicna…Ayaamahan arrinkiisa waa la garan la’yahay…waxaanba u malaynayaa in uu naag kale meelahaas ku haysto…malahaba aan ka daayo, waaba hubaal e…maxaa la tarayaa oo la isku hayaa…waa tan habeen walba saacado dambe la iska soo leeg-leegsanayaaye… maa la iska joogo guryaha waqtigan laga soo lugeynayo…
Dhinaca kale, ninka masayrsani wuxuu isaguna yiraahdaa: Wallee tan kadabkeedi baa go’ay…intaas meelo baas iyo reero muskood ayey ku maqan tahay….War illeyn tan oo kale…mar kasta xaafadda jim jaam iyo wax aan la aqoon ayey ku sii socotaa…naa muxuu ahaa ninka aad la taagnayd? Kaalay yaa kula hadlaayey? Muxuu kuu sheegayey? Intaas belo jinni hoosta waa ku wadan jirtey…maya maya..iska daa aniga ayaa aqaan waxaan samayn doono…wallee kan dhalada hoolan iyo aniga mid uunbaa loo go’ayaa…
Ninka iyo ooridiisu iyagoo markii horeba is-faham isku guursadey, ayey haddana isku qabaan hawlo gaar ah. Si hoose ayey isaga war qabaan. Sidaas darteed ceeb iyo fadeexo ayaa loo arkaa amaba ay noqonaysaa qoyska sheekadiisa bannaanka lagu hayo ama laga maqlo. Karaamada iyo cisiga qofku mujtamaca ku leeyahay oo luma ama meesha ka baxa, waxay horseedaa is-necayb fog oo labada qof soo kala dhex gala, kaas oo dila ama meesha ka saara is-tixgelintii iyo isu-diulqaadashii qoysku ku samaysnaa.
Aragti kale, waxay tilmaamaysaa in masayrku shaqsiga ku abuuro xaalado baqdin, shaki iyo welwel joogto ah. Tallaabadan waxay keeni kartaa in qofku ku hdaqaaqo falal khatar ah, oo mararka qaarkood u horseeda in shaqsigu geysto dil iyo dhaawacyo halis ah. Qofku in uu sidaas bahadnimada ah u dhaqmo waxaa ugu wacan maqnaanshaha maskaxdiisa oo gebi ahaanba uu buuxiyey masayr. Waxaa kaloo intaas weheliya , masayrku dadka qaarkiis wuxuu ka kaxeeyaa nolosha caadiga ah, oo waaba ay waashaan.
Haddaba, sida aynu ka dheehan karno macluumaadka aan hore u soo sheegnay, masayrku waa isir si mug leh u waxyeeleeya shaqsiyadda qofka. Markaa masayrka waxaa lagu tiriyaa cudur la mid ah cudurrada maskaxda ama neerfaha ku dhaca, sida isfiilitada, waalida, waraabowga, baraaliska, iwm, kuwaa oo si weyn u waxyeeleeya garashada qofka. Masayrka waa xaalad ay ka siman yihiin ragga iyo haweenka, weliba ragga ayaa loo malaynayaa in ay ku daran yihiin. Masayrku kuma koobna oo keliya haweenka lala guursado, ee waa xaalad qalafsan oo qofka kaga dhacda dhanka maskaxda.
Masayrku ma laha ayaan oran karnaa astaamo iyo xaalado nololeed oo si gooni ah loogu xaglin karo. Masayrku wuxuu saamayn karaa nooc kasta oo bulshada ka mid ah, kuwaas oo ku kala sugan xaalado dhaqaale oo kala duwan. Masayrku waa xaalad cudur oo jirta, inkastoo ay jiraan dadka qaar ka badbadiya oo dano iyo macne kale ku fushada. Waxaa hubaal ah in masayrku inta badan uu haleelo dadka aan sida weyn wax uga aqoon ama aan xiriir fiican la lahayn mujtamaca. Dadkaan ayaa badankoodu uu yar yahay adduun-araggoodu, waayo haddii ay si fiican u dhiraan-dhirin lahaayeen dhibaha tuhun ee ay kala tirsanayaan, markaas waxay heli lahaayeen waddo sax ah oo ay ku dhaqaaqaan.
Waxaa xaqiiqo ah, Qoyska uu soo dhex galo masayrku in natiijadoodu ay ku dameyneyso burbur iyo kala-tag eed iyo aafooyin badan reebta. Dhinaca kale, ma jirto wax waan-waan ah oo laga dhex samayn karo qoyska masayrku ka dhex jiro. Sababta sidaas loo oran karo waxay tahay, marka la isku dayo in xaaladdooda la galo, ayaa ruuxa masayrsani wuxuu hawshii dhex-dhexaadinta ee la wadey wuxuu u beddelaa ama ku sheegaa mid dano gaar ah laga leeyahay. Sidaas oo dhacdana waxay abuuraysaa in xaalku uu mar kale cirka isku-shareero. Sidaas darteed, qoyska masayrku soo galay, ayaa badanaaba dawadiisu waxay noqotaa isa-siidayn dhaqsa ah oo horay loogu tallaabsado…
La soco Qaybta 3aad……………(la soco qaybta sadexaad beri (Arbacda Idinka ALLE)